Cameron.....: မြူ ခိုးကြားကပစ်မှတ်တစ်ခု.....
သူဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျွန်မမသိသလို ကျွန်မဘယ်သူလဲဆိုတာ သူမသိဘူး......
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဟာ မြူ ခိုးငွေ့တွေကြားမှာဆုံတွေ့ကြတာဆိုတော့ ဘာမှမသေချာမရေရာဘူး.....
ကျွန်မတို့ဟာ ဘာမှမဟုတ်ကြဘူး... ဆိုလိုတာက သူငယ်ချင်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူး မိတ်ဆွေတွေလည်းမဟုတ်ကြသလို ချစ်သူတွေလည်းမဟုတ် ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့...
သူမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ စီးကရက်ငွေ့နဲ့မြူ ခိုးတွေကြားမှာ သူဟာ ဘယ်လိုနှုတ်ခမ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်သလဲဆိုတာ မသိလိုက်သလို ကျွန်မဆံနွယ်တွေဟာ ဘာအရောင်ဆိုတာလည်း သူသိမှာမဟုတ်ဘူး...
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့တစ်ယောက်စာမျက်နှာကို တစ်ယောက်ဖတ်တတ်ကြတယ်....
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ရစ်သိုင်းနေတာက မြူ ခိုးတွေချည်းပဲ......
သို့ပေမယ့် အသိမြင်တွေကတော့ ကြည်လင်ပြတ်သားတယ်....
ခံစားမှုတွေက လှိုင်းလုံးတွေလို ပုတ်ခတ်တယ်.................
ကျွန်မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အသိတွေထက် သူသိတဲ့အသိက ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများရှိတယ်....
သူ့စကားလုံးတွေအားလုံးရေတွက်လိုက်ရင် ကျွန်မပိုင်ဆိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေထက်အများကြီးသာနေလိမ့်မယ်.....
သူဟာ ဒဿနစာအုပ်တစ်အုပ်ဆို ကျွန်မဟာ အဆုံးအစမဲ့တဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်...
သူဟာ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုရင် ကျွန်မဟာ အဆုံးအစမဲ့တဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်နေမယ်....
သူဟာ ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်မဟာ အဆုံးအစမဲ့တဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်နေမှာပဲ .....
သူဟာ သစ်လွင်တဲ့ မော်ဒန်ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်
ကျွန်မကတော့ နှစ်ချို့နေပြီဖြစ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ဟောင်းတစ်အုပ်ပေါ့....
ကျွန်မတို့စတင်ဆုံတွေ့မှုဟာ မြူ ခိုးတွေကြားမှာဆိုတော့
အသေချာဆုံးက... အရာရာဟာ ခပ်ပါးပါးလွင့်လွင့်လေးပဲရှိနေမှာပါ....။
အဲဒီမော်ဒန်ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်ဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျွန်မဘ၀ထဲကို တခဏလေးရောက်လာခဲ့တဲ့ ကိုကိုပေါ့...။
မြူခိုးငွေ့တွေပတ်လည်ဝိုင်းတဲ့ ကပွဲတစ်ခုမှာ ကျွန်မတို့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်...။ ဗာဒံစေ့ပုံမျက်အိမ်ရှည်မျောမျော အကြည့်စူးရှရှတွေနဲ့ ကိုကို့ရဲ့ ရှည်ကိုင်းကိုင်းအရပ်အောက်မှာ အုပ်မိုးခံခဲ့ရတဲ့ ၀ိုင်ချိုတွေနဲ့ ကိုကို့ရဲ့ ဓါးသွားထက်မှာ ကျွန်မအကြိမ်ကြိမ်သေဆုံးခဲ့ရဖူးတယ်...။
အားလုံးကပြောကြတယ် ကိုကိုက ရောင်စုံလိပ်ပြာလေးတွေကို စောင့်ဖမ်းနေတဲ့ မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်တဲ့..။ မိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့ ကိုကို့ပိုက်ကွန်မှာ ကိုယ်တိုင်အမိလာခံတဲ့ ကတ္တီပါနက်ရောင်တောက်တောက်နဲ့လိပ်ပြာတစ်ကောင်ဟာ ကျွန်မပေါ့....။
တွေ့လား အဲမှာ ကတ္တီပါနက်ရောင် လိပ်ပြာတစ်ကောင် ကိုကိုပစ်လိုက်မယ့် ကျည်တွေထိုးထွင်းဖောက်ခံဖို့ အတောင်ပံဖြန့်ထားနေလေရဲ့..။ ကိုကို လက်မနဲ့လက်ညှိုးလေးဝိုင်းပြီး ပစ်မှတ်ချိန်နေစရာတောင် မလိုခဲ့ဘူးမဟုတ်လား...။
တကယ်တော့ ကိုကို့ညာဖက်ရင်ဘတ်မှာ ထွင်းဖေါက်ဝင်သွားခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတစ်ခုဟာ ကျွန်မကို အဝေးကချောင်းပစ်နေတဲ့ ကျည်တောင့်နဲ့နှိုင်းစာရင် ဘာမှမဟုတ်လောက်ပါဘူးဆိုတာ ကိုကိုကောင်းကောင်းသိမှာပါ...။
ဒါကြောင့်... ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်နဲ့ တူတဲ့ ကိုကို့ကို ကျွန်မကြိုက်တယ်....။
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အတူကော်ဖီထိုင်သောက်တုန်း ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ ကော်ဖီငွေ့တွေ မြင်လွှာကို ကွယ်သွားတဲ့အခါ ကိုကိုက ကျွန်မကို လိုက်လိုက်ရှာတယ်...။
ကိုကိုက ကော်ဖီခါးခါးကိုမကြိုက်ဘူး... သူ့ကိုယ်သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ညီမျှခြင်းသွားကျတယ်...။
ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူကြိုက်တတ်လာအောင် ကျွန်မက သူကော်ဖီခါးခါးသောက်တတ်လာအောင် တဖြေးဖြေးနဲ့ဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်...။
Sugar လို့ရေးထားတဲ့ အထုပ်ရှည်ရှည်လေးထဲက သကြားပွင့်လေးတွေ ကိုကို့ကော်ဖီခွက်ထဲကို ခုန်ဆင်းချိန်မှာ ကျွန်မက ကျွန်မကော်ဖီခွက်ထဲက ခါးသက်သက်အရသာကို ခံယူလို့... ကိုကိုကတော့ ကျွန်မအပြုံးတွေကို ဖျော်သောက်လေ့ရှိတယ်...။
အဲဒီမနက်က အာရုံမတက်ခင် အလင်းရောင်မှုန်မှုန်အောက်မှာ ကိုကိုနဲ့အတူ မနက်စာစားဖို့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာရင်း ဆောင်းလေအဝှေ့အေးခနဲမှာ ကိုကို့ဂျာကင်ထဲ ကျွန်မ အမှတ်မထင်ဝင်တိုးမိသွားခဲ့တယ်..။
shopping mall တစ်ခုကနေ မက်မွန်သီးနံ့ နှုတ်ခမ်းဆီတောင့်လေး ကျွန်မ၀ယ်ခဲ့တုန်းကလည်း နေရောင်ခပ်ဖျော့ဖျော့အောက်မှာ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းပေါ်က မက်မွန်သီးရနံ့လေးကို အမှတ်မထင် ကိုကိုမြည်းစမ်းကြည့်လိုက်တော့ လေပြေနဲ့အတူ ကျွန်မ ပါးပြင်တွေ နွေးခနဲမက်မွန်သီးရောင်ထသွားကြတယ်...။
မိုးဖွဲဖွဲအောက်မှာ တစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ လေပြေနုတွေက ကျွန်မနဖူးပြင်က ချွေးစို့တွေကို မတိတ်နိုင်ခဲ့...။ ကော်ဖီပူလို့ဖြစ်မှာပါလေ...။ ကိုကိုက ကျွန်မနဖူးပေါ်က ဆံမျှင်စတွေကို လက်နဲ့ဖယ်ပြီး စက္ကူလက်ကိုင်ပုဝါနဲ့ ခပ်ဖွဖွတို့သုတ်ပေးခဲ့တယ်...။
ကျွန်မ Cappuccino သောက်လေ့မရှိဘူး....။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အဲဒီကော်ဖီကိုမှာသောက်ခဲ့တယ်...။ waiter ကောင်လေးကိုမှာလိုက်သေး... ကော်ဖီမျက်နှာပြင်ကို အသည်းပုံလေးဖော်ပေးနော်ရယ်လို့...း)
ဘတ်စ်ကားကျပ်ကျပ်သပ်သပ်ထဲ တစ်ညနေ ကျွန်မနဲ့ကိုကို အတူတိုးစီးခဲ့ကြတုန်းက ကျွန်မနှုတ်ခမ်းအပေါ်ဖက်က ချွေးသီးလေးတွေကို ကိုကိုက သူ့ရှပ်အကျီင်္လက်ဖျားလေးနဲ့ လူကြားထဲ တယုတယသုတ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်...။
ချိုတလှည့် ခါးတလှည့် ကိုကို့အနမ်းတွေအောက်မှာ ကျွန်မ ပျော်ဝင်ရစ်မူးခဲ့ရတယ်...။
ညနေ...နေရောင်က ကျွန်မမျက်နှာကို တစောင်းအနေထားထိုးတယ်...။ ကိုကိုက စီးကရက်တစ်လိပ်ကို ဇိမ်ပြေနပြေသောက်နေတယ်...။ ကျွန်မကတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ သီးစုံပုစွန်တန်ပူရာဆလပ်ကို ခရင်းနဲ့ထိုးဆွပြီး စားလိုက် ကော်ဖီသောက်လိုက်နဲ့...။ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းပေါ်က အနီရဲရဲနှုတ်ခမ်းနီတွေက ကော်ဖီခွက်မှာ စွန်းထင်လို့...။ အဲဒီညနေက ကိုကိုးရောင် ကျားသစ်ကွက် ဂါဝန်ပျော့ပျော့ရှည်ရှည်ကို ကျွန်မ၀တ်ခဲ့တယ်...။
“ကိုယ်တို့လမ်းခွဲရအောင်”လို့ ကိုကို့နှုတ်ကထွက်ကျလာချိန်မှာ ကျွန်မကတော့ သီးစုံဆလပ်ကို ဟန်မပျက် ခရင်းနဲ့ထိုးဆွစားနေပေမယ့် ကိုကို့စကားတွေက ကျွန်မနှုတ်ခမ်းတွေကို တုန်ရင်စေခဲ့တယ်...။ ကျွန်မတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်...။ နေ၀င်ခါနီးနေရောင်အောက်မှာ ကျွန်မအပြုံးတွေပီပြင်နေရဲ့လား...။
ဒါဆို ... ဒါဆို... ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အတူကော်ဖီသောက်မယ့်အချိန်ဟာ ဒါနောက်ဆုံးလားးး....။ ဟုတ်လား...???
အချစ်ဟာ တိမ်ခိုးတိမ်ငွေ့တွေလို ပျောက်ပျက်လွင့်ပြယ်လွယ်သလား.....??
ဟုတ်မယ်... ကိုကိုကတော့ ခဏခဏမေးဖူးသား...“ချစ်လား” တဲ့...။ ကျွန်မကတော့ လွင့်ပြယ်လွယ်တဲ့ ကျွန်မအချစ်ကို မယုံကြည်လို့ တစ်ခါမှ ကိုကို့ကို “ချစ်တယ်”လို့ ပြန်မဖြေဖူးခဲ့ဘူး...။
တကယ်တမ်း ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကိုကိုဟာ အချစ်ကလွဲလို့ ကျွန်မကိုအားလုံးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်...။ ကျွန်မတစ်သက်တာ တခါမှမကြုံဖူးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အထိအတွေ့ အယုအယတွေအပြင် ရုန်ရင်းကြမ်းတမ်းမှုတွေ စွန့်စားမှုတွေ ရီဝေတိမ်းညွတ်မှုတွေ သိမ်းသွင်းညို့ငင်မှုတွေ ခါးသက်မှုတွေ ...။
ကိုကိုက ကလေးလို့ခေါ်တတ်တဲ့ Lana Del Rey လို အနီရဲရဲနှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးဆိုးတတ်တဲ့ လမ်းသွားရင် ကိုကို့လက်ကိုမြဲမြဲဆုတ်ကိုင်ထားတတ်တဲ့ ရည်းစားများတဲ့ ကိုကို့ရဲ့နံပါတ်စဉ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့ (ကျွန်မ)နဲ့ ကိုကို့ကြားမှာ အချစ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူး ..။ ကြားခံတစ်ခုအနေနဲ့တောင်မရှိခဲ့ပါဘူး...။
မိုးရွာထဲမှာဖိနပ်ပျက်သွားခဲ့လို့ ကိုကိုဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျစ်ဆံမြီးသဲကြိုးဖိနပ်ကလေး ကျွန်မအမြဲစီးဖြစ်နေမှာ..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖိနပ်ပေးရင် ကွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူကို ကျွန်မယုံကြည်လိုက်လို့ပဲ...။ ကိုကိုပေးထားဖူးခဲ့တဲ့ တီရှပ်လည်း ဘယ်တော့မှဝတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ရုန့်ရင်းဆန်လွန်းတဲ့ ကိုကို့ထွေးပွေ့မှုတွေကို အမြဲသတိရမနေစေချင်လို့ပါ...။ ကိုကို့လက်မှတ်ပါတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း စာကြည့်တိုက်တစ်ခုခုမှာ လှူလိုက်ပါရစေ...။
ကိုကိုပြောသလိုပဲ တစ်ပတ် နှစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူလိုက်ရင် ကိုကို့ကို ကျွန်မ မေ့ပျောက်သွားလိမ့်မှာပါ..။
ကျွန်မတို့ နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှပြန်ဆုံဖြစ်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူး....။
Posted by coral nyo at 01:21
ကျွန်မကတော့ လွင့်ပြယ်လွယ်တဲ့ ကျွန်မအချစ်ကို မယုံကြည်လို့ တစ်ခါမှ ကိုကို့ကို “ချစ်တယ်”လို့ ပြန်မဖြေဖူးခဲ့ဘူး...
ကြိုက်တယ်.. တစုံတယောက်ကို ချစ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တမ်းကျတော့ လက်တွေ့မှာ မလွယ်ကူပါဘူး.. (၃၀နားနီးအတွေး ဟဟ)